ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂
အခုတစ်လော ကျနော့်စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်နေသည်ဟုပြောလျှင် ရူးတော့မှာပေါ့ဟု ထင်စရာရှိသည်။ ကျနော်ဆိုလိုချင်သော သဘော က စိတ်အချဉ်တွေပေါက်နေမိချင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ အရာရာမှာ စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာတွေ မနည်းမနော ရှိမည်ထင်သည်။ ကျနော်တို့လို နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား Passport အနီလေးကိုကိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာတွေ များ လှသည်။
သံယံဇာတများတယ်ကွ..ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။ မေတ္တာတရားနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံဘဲ..စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။ ဘုရားစေတီ ကျောင်းကန်တွေနဲ့ ခင်မင်တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ နေတဲ့ နိုင်ငံကွ..ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်..မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငါတို့သွားလည်ရင် စိတ်ချရပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာမေးရင် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။
ကျနော် သီးမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်အချဉ်ပေါက်ဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ချို့ ပြုမူနေထိုင်ပုံတွေ။ ဒီမယ် ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့် ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို သူ့နိုင်ငံသူ ချစ်ကြတဲ့သူချည်းဘဲ။ ဒါလောက နိယာမဘဲမို့လား။ သဘာဝလဲ ကျတယ်။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ညှပ်ထားတာ တရုတ်ကြီးနဲ့ ကုလားကြီး။ တရုတ်ကြီးကလဲ တရုတ်တွေ ကောင်းစားဖို့ ကျနော်တို့ဆီကနေ ဘာရနိုင်သလဲ ကြည့်မှာဘဲ မို့လား။ ဒါကို သွားပြီး ကျနော်တို့က အပြစ်ပြောလဲ အရူးပေါ့ဗျာ။ ကြားထဲကမှ ယန်းကီးတွေ လာလာပြီး ကယ်တင်မှာလိုလို၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်မှာလိုလို လုပ်တာလဲ စေ့စေ့ကြည့်ပြီး မေးချင်တယ်။ ရိုးသားလားလို့။ ကျနော်ကတော့ ဘယ်နိုင်ငံကမှာ သူများနိုင်ငံကို အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အလမ်းမရဘဲ အကူအညီ အများကြီး မပေးနိုင်ဘူး။ မပေးဘူး။ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတဲ့ သူချည်းဘဲ။
နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားတိုင်းက ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရမှာ။ ကျနော် ဒီလိုပြောလို့ သောက်ကြီးသောက်ကျယ်ကွာလို့ ခင်ဗျား ထင်ချင် ထင်မယ်။ ဒီမယ်..ကျနော် ပြောတာက လမ်းဆုံလေးခွထွက်ပြီး အစိုးရဆန့်ကျင်ပြဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံး နိုင်ငံသား တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဘာဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်သူကောင်းတယ်၊ ဘယ်သူမကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကတော့ ခင်ဗျား အမြဲဖြစ်အောင် ကြိုးကို ကြိုးစားနေရမှာ။ ဒါဆို မင်းကတော့ သိတယ်ပေါ့လို့ ခင်ဗျားက အငေါ်တူးချင် တူးမယ်။ ကျနော်သိအောင် ကြိုးစားတယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားနေဖို့က ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ တာဝန်မို့လား။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဘာဖြစ်နေတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေက ဘယ်လို ဆိုတာ စိတ်မ၀င်စားလဲ ၀င်ကို ၀င်စားရမယ်။ ဒါ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ဘဲလို့ ကျနော် ယူဆတယ်ဗျာ။
ဟိုတစ်နေ့က ကျနော် စိတ်ထဲ ထောင်းခနဲ့ကို လူတစ်ဖက်သားကို ဒေါသတွေ ထွက်သွားတယ်။ အဲဒီကောင်လေးက အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီးသား။ အညာသား။ နေပုံထိုင်ပုံ ရိုးပုံရိုးလက်ပါ။ လူမှုဆက်ဆံရေး အနေနဲ့ ကျနော်(တို့) အတွက် ဘာအဆိပ်မှ မရှိတဲ့ ကောင်လေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်နေ့က ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဆက်စပ်တယ် မသိ။ အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေ အကြောင်းဆက်စပ်ရင်းနဲ့ ကျနော်က ငါတို့ အားရင် ပိုက်ဆံလဲ ပိုရင် ဘာလီကျွန်းကိုသွားလည်ကြရအောင်ကွာလို့ ပြောမိတယ်။ သူက အဲဒီကျွန်းက ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ အင်ဒိုနီးရှားမှာလို့ ကျနော် အေးအေး ဆေးဆေးဖြေပါတယ်။ သြော် အင်ဒိုနီးရှားက နိုင်ငံအတော်သေးတော်နော် အစ်ကို ဆိုပြီး ပြန်ပြောတော့ ကျနော် စိတ်ပေါက်ပြီဗျာ။
ဒီမယ်ဗျ..ခင်ဗျား ကျနော့်ကို ပြောချင်ပြောမယ်။ သူ့ဘာသာ မသိတာ အပြစ်လား။ သူ့ထမင်းသူစားပြီး နင့်အပူလား ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အပြစ်ပြောချင် ပြောမယ်။ ကျနော် လက်ခံတယ်။ ဒါ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တစ်ယောက် ဘာလီကျွန်းဆိုတာ ဘယ်မှာမှန်းမသိ။ အင်ဒိုနီးရှားဆိုတာ အရှေ့တောင် အာရှမှာ အကြီးဆုံးဆိုတာ အရှေ့တောင် အာရှသားအချင်းချင်း ဖြစ်ပြီး မသိတာကြတော့ ကျနော့်ဘာသာ လွတ်လပ်စွာ စိတ်ပေါက်မိတယ်ဗျာ။
သူဝါသနာပါတာဘဲ သူသိတော့မပေါ့လို့ ခင်ဗျား ကျနော့်ကို ဖြေသိမ့်ရင်လဲ ကျနော်လက်ခံပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသု တဆိုတာ ဘယ်သူမဆိုရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲ လက်ခံဗျာ။ အဲဒီကောင်လေးဆို အသက်က ၂၆ ကျော်နေပြီ။ အင်တာနက် ကောင်းကောင်းသုံးတတ်တယ်။ Wikipedia ကိုတော့ သုံးတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်ဗျာ။
ဆိုပါတော့ …စာရေးဆရာကြီးတွေ၊ လူကြီးသူမတွေ ခဏ ခဏ ပြော ပြောနေတဲ့ စာဖတ်ကျ၊ စာဖတ်ကျဖို့။ ဘာစာတွေ ဖတ်ရမလဲ ။ စာဖတ် တော့ ဘာရမလဲမေးတဲ့ သူတွေကို ကျနော်ဘယ်လို မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ပြန်ကြည့်ရကောင်းမှန်းတောင်မသိ။ ဒီလို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ အင်တာနက်ထဲမှာ တစ်ရက်ကို ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လောက်၊ နှစ်ပုဒ်လောက်ပေးဖတ်ရတာ နာရီဝက်မကြာပါဘူးဗျာ။
နောက်ဗျာ..ကျနော့်မှာ ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ရက်မှာ ကျနော်တို့ တစ်တွေ မကောင်းရာ မကောင်းကြောင်းလုပ်ဖို့သွားကြရင်းနဲ့ ဆိုင်က ကောင်မလေးကို (ကန်တော့ပါရဲ့ ဆရာ) မင်း ဆရာဦးအောင်သင်းသိလား လို့ သူက မေးလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ဦးအောင်သင်းတော့ မသိဘူး အိမ်ဘေးက ရေစည်လှည်းတွန်းတဲ့ အောင်ဝင်းတော့ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောလို့ စိတ်တွေဆိုး၊ အောင်သင်းတောင် မသိတဲ့ ကောင်မ ဘာညာဆိုပြီး ပြသနာတွေ ရှာလို့ ကျနော်တို့ ပြန်လာခဲ့ကြဘူးတယ်။
ထားပါတော့။ အဲဒီလို ဆိုင်မှာ ယောက်ကျားလေး ဧည့်သည်တွေကို လက်ခံတွေ့ရတဲ့ ကောင်မလေးက ဆရာဦးအောင်သင်းမသိတာ အပြစ်လားဗျာ။ ကျနော့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ရာထူး မသေးတဲ့ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာပါ။ ခင်မင်ဖို့ ချစ်ဖို့လဲ အတော်ကောင်းပါတယ်။ သူ ကျနော်အလုပ် လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်လာတယ်။ အိမ်ကိုခေါ်ပြီး ဧည့်ခံပြီး စကားစမြည်ပြောကြရင်းနဲ့ ကျနော်တို့က ဖတ်စရာ စာအုပ် ငတ်နေတဲ့ သူတွေဆိုတော့ ခင်ဗျား ပြန်ရင် ဖတ်ဖို့ပါလာတဲ့ စာအုပ်တွေ ထားခဲ့ဗျာလို့ တစ်ယောက်က ပြောလိုက်တယ်။ သူက ဘာဖတ်စရာမှ မယူလာဖြစ်ပါဘူးဗျာတဲ့။ အင်းလေ လောလော၊ လောလော ထွက်လာရတယ် ထင်ပါတယ်လို့ ကျနော် ဖော့တွေးရင်းနဲ့ ကျနော်ဖတ်လက်စ ဆရာသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ စာအုပ်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး ဟာ သိန်းဖေမြင့်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဗျဆိုလို့ စကားလမ်းကြောင်း ဇွတ်လွှဲခဲ့ရပါတယ်။
ဂျာနယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူက သိန်းဖေမြင့်မသိတာက စားသောက်ဆိုင်က ကောင်မလေး ဆရာဦးအောင်သင်းမသိတာထက် ပိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ကျနော် လွတ်လပ်စွာယူဆတယ်ဗျာ။
အခု နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ တစ်ယောက်ကျတော့ ကျနော် ဒေါသထွက်တာ လွန်လား ခင်ဗျားဘဲ ဆုံးဖြတ်ပေတော့။ အဲဒီတစ်ယောက်ကျတော့ ကျနော်တဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးသွားဟန်လွှဲ ဘယ်သူမှန်းမသိ ကျနော် ကြားရတာပါ။ ကျနော် ဒီစာရေးနေတဲ့ အချိန်က ၀၂၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ဗျာ။ ဦးသိန်းစိန်က ဧရာဝတီ ပရောဂျက်ကို ရပ်ထားမယ်လို့ ပြောပြီးသွားပြီ။ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဧရာဝတီ အရေးဖြစ်နေတာ သုံးလကျော်ကြာသွားပြီ။ အင်တာနက်မှာ၊ အပြင်မှာ ပလူပျံနေအောင် မြင်ရ၊ သိနေရတယ်မို့လား။
အဲဒီတစ်ယောက်က မနေ့က သူ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်ဟန်တူသူကို မေးနေတာ ကျနော် ကြားရတာ။ ဧရာဝတီဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဆည်ဆောက်တော့ ဘာဖြစ်မှာလို့လဲ၊ မကောင်းဘူးလား။ အေး ငါသိတောင် မသိဘူး ဟီး ဟီး ဟီး ဆိုပြီး သူ့ရီသံကို ကျနော် ဆက်မကြားလိုတော့လို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ ကိုင်း..ကျနော်လွန်သလား။ အဲဒီလို နိုင်ငံသားတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်မှားသလားဗျာ။ ကျနော့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း စိတ်တွေအချဉ်ပေါက်လို့….
11 Responses to ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း
မိုးပွင့်on February 27, 2012 at 9:22 am
ပြောရအုန်းမယ်ဆရာရေကျမလဲစိတ်အချင်ပေါက်နေတာ၊ ဆ၇ာပြောတာတွေသဘောတူပါတယ်၊ လူတွေကသိသင့် သိထိုက်တွေတော့ သိသင့် တာပေါ့ ၊ အကြောင်းအရာအကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ၊ ကိုယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးဖြစ်စဉ်တွေ၊ ကိုယ့် လုပ်ငန်းတဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟာတွေ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပါတ်သက်တာ
တွေရောတတ်နိုင်သလောက်လေ့ လာသင့် ပါတယ်၊အဲဒါတွေအားလုံးကလဲတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ ကိုယ်တွေကိုလာပါတ်သက်နိုင်တာမို့ ပါ၊ကောင်မလေးက ဦးအောင်သင်းတော့ မသိဘူးပြောတာအပစ်မဟုတ်ဘူး၊
သူတို့ တောင်စာသင်ဖို့ အခြေအနေမပေး၊ ဘဝအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရတာ၊ သွားမေးတဲ့ 
သူကမှပြသနာအစစ်၊ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဆရာဦးအောင်သင်းစာတွေဖတ်ပြီးမျိူးဆက်သစ်တို့ တိုးတက်ရစ်ဖို့ မလုပ်ဘဲ၊မျိုးဆက်သစ်တို့ မျိုးပြုတ်ရစ်ဖို့ သွားလုပ်နေလို့ ဘဲ၊သြစတေးလျားမှာ၊ကျမတခါကအာဖကန်နစ္စတန်ကအသက်၃၀နီးပါးပညာတတ်လူငယ်တယောက်နဲ့ တွေ့ တော့ သူကပြောတယ်၊ဗမာပြည်ဆို
တာတခါမှမကြားဖူးဘူး၊မင်းတို့ တိုင်းပြည်ကရွာလေးလိုမျိုး လားလို့ မေးတာကြုံဘူးတယ်
၊နောက်အိန္ဒိယကသူနာပြုဆရာမတယောက်ကသူတို့ နဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျမတို့ 
ဗမာပြည်ကိုမသိဘူးတဲ့ ၊ဘယ်လောက်ခံပြင်းဖို့ ကောင်းလဲ၊နောက်ပြီးတရုတ်ပြည်မှာတွေ့ တဲ့
တရုတ်တယောက်ကကြတော့ မင်းတို့ နိူင်ငံမှာရထားရှိလားလို့ ကျမကို့မေးတာခံခဲ့ ရဘူးတယ်၊
ကဲဘယ်လောက်စိတ်အချဉ်ပေါက်ဖို့ ကောင်းလဲ၊ အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေကဆိုသလိုဘဲ…..
အညာသီရံ on February 27, 2012 at 9:56 am
‘အဲဒီကောင်လေးက အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီးသား။ အညာသား။ နေပုံထိုင်ပုံ ရိုးပုံရိုးလက်ပါ။ လူမှုဆက်ဆံရေး အနေနဲ့ ကျနော်(တို့) အတွက် ဘာအဆိပ်မှ မရှိတဲ့ ကောင်လေးပါ၊’
အဲဒီစာတန်းရဲ့ စာသားရွေးချယ်ပုံကိုတော့ ဖတ်ပြီးစတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်၊၊
Koung Nyunt on February 27, 2012 at 10:22 am
အချဉ်မပေါက်ပါနဲ့ဦးဖိုးထက်ရယ်၊ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးတောင် ၆ တန်းဘဲ
အောင်တယ်လို့ဦးစိန်ကျော်လှိုင်က (စစ်ဗိုလ်လူထွက်အစိုးရနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး) မှာရေးထားတာကြောင့် ဦးဖိုးထက်လိုနိုင်ငံတကာအတွေ့ အကြုံရှိပြီးသားလူက အနည်းဆုံး သမတ ရုံးဝန်ကြီးလောက်တော့ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ အကယ်၍များ ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများဖြစ်ခဲ့ရင် လိုင်တူချစ်သူများကို ဘယ်ဘတ်စ ကား (ကားထီးလား၊ ကားမလား) ကိုစီရမှာလည်းလို့ မေးရင် ? စိတ်အချဉ်ပေါက်ဦးမှာလား ခင်ညာ။ တစ်ခုတော့မှာလိုက်မယ်၊ အထက်တန်းစာရေးတော့ ဘယ်ဌာနမှာမှ မလျှောက်ပါနဲ့ ၊ ဘာပြုလို့ လည်း ဆိုတော့ အဲဒီ့နေရာက ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှ ခန့် လို့ ရတယ်တဲ့။
ohnmar on February 27, 2012 at 11:05 am
Ken on February 27, 2012 at 8:38 pm
Don’t piss off. He surely knows how to protect himself. He’s been readingalot of books in his life.
One thing I like about the author is at least he is honest about it.
Nandar on February 27, 2012 at 11:36 am
အနားမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းညီမလေးများကို စာဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းရတိုင်း…. လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံ ဗဟုသုတလေးကိုတောင် မသိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တိုင်း…. ငါကမြန်မာပြည်ကလို့ပြောတိုင်း မြန်မာပြည် ဘယ်နားမှန်းမသိတဲ့ Passenger တွေနဲ့တွေ့တိုင်း…. မြန်မာဆိုတာနဲ့ Junta Government ဆိုပြီး ပြောတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့တိုင်း……. ငါတို့သွားလည်ရင် safe ဖြစ်ပါ့မလားလို့ မေးတဲ့ passenger တွေကို ရှင်းပြရတိုင်း …… ကျမ အမြဲ စိတ်အချဉ်တွေပေါက်ရပါတယ်။ ထပ်ပြီး စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာကတော့…. အင်တာနက်ဆို facebook နဲ့ email ပဲ သုံးရမှန်းသိတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသော သူငယ်ချင်းအချို့ ကိုတွေ့ရတိုင်းပါ…
thu thu on February 27, 2012 at 1:48 pm
Because, they do not want to know, not care & force to shut down their self about their own country.Sometime they evenashame of their self that as they are part of Burmese.
One day they will face the problem of not being like to be what their-self.
Their mind is on the modern comfort material only.
ကောသလ အိမ်မက် really come true, don’t you think.
leohtike on February 27, 2012 at 4:12 pm
အင်း လွတ်လပ်စွာ စိတ်အချဉ်ပေါက်ခွင့်ရှိတာမို့ ထပ်ပြီးပေါက်ကြတာပေါ့ဗျာ….
ဘာလီကျွန်းဘယ်နားမှာ မရှိမှန်း သိတဲ့လူထက်စာရင် UN တို့ NGO တို့ကို မသိတဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေဆို ဘယ်လိုများပြောကြမလည်းဗျာ… အဲ့ဒီလိုလူတွေလည်း ကျနော်တွေ့ဖူးပါတယ်.. မနန္ဒာ ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံကို အာရှမှာ ရှိတာလားလို့မေးတဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေ ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်… ဘယ်နားမှာ ရှိမှန်းမသိလို့ ကမ္ဘာ့မြေပုံပြပြီး ဒါမှာ ငါတို့ နိုင်ငံကွလို့ ပြောပြခဲ့ ရဖူးတဲ့ အဖြူတွေ ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်… အဲ အဲ့ဒီလူတွေက ပညာမတက်တဲ့လူတွေလို့တော့မထင်ကြနဲ့နော်… အနည်းဆုံး မြန်မာလိုပြောရင်တော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သားတွေပါဗျာ…. မြန်မာပြည်သွားလို့ Safe ဖြစ်ပါ့မလားတို့၊ အဖမ်းခံရမလား (အစစ်ဆေးခံရမလား) လို့ မေးတဲ့ သူတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ… အဲ ဦးသန့်ကို တောင် မကြားဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားတွေလည်း တွေ့ဖူးပါကြောင်း….. အဲ့ဒီလူတွေကို ကျနော် ပိုပြီးတော့ စိတ်အချဉ်ပေါက်ပါတယ်…. နော်ကတခုကတော့ FB Password မေ့သွားတာကို Google ကနေပြီး ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရလည်း ဘာညာရှာတက်ပြီး Windows 32 or 64 bit လား ဆိုတာကို သိချင် Google မှာရှာကြည့်ဆိုတော့ ဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ ခေတ်ပညာတက် မြန်မာတယောက်ကိုတော့ စိတ်အချဉ်ပေါက်ဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း……..
Nandar on March 3, 2012 at 4:20 pm
ကိုလီယိုရေ… ကျမလည်း ပုံဆွဲပြခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းပါဘူး….. ဒါပေမယ့် Australia မှာ လေယာဉ်ပေါ်တက်လာလာခြင်း ကျမက Good morning Sir! လို့နှုတ်ဆက်တာကို ကျမရဲ့ name tag က အလံကိုမြင်ပြီး မင်္ဂလာပါ လို့ ပြန်နှုတ်ဆက်တဲ့ Australian တယောက်ကြောင့်တော့ ကျမတော်တော် အံသြဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်….. ဒါပေမယ့် အာရှနိုင်ငံသား အချင်းချင်းတွေက မြန်မာကို မသိတာတော့ တော်တော် စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာ ကောင်းတာပါ။ မြန်မာပြည်ဘယ်နားမှန်းမသိတဲ့ Malaysian တွေ၊ ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာကိုတောင်ရောနေတဲ့လူတွေ၊ မလေးရှားက မြန်မာပြည်ထက်ပိုကြီးတယ်လို့ လာငြင်းကြသူတွေကိုတော့ ပထဝီရောလေ့လာဘူးရဲ့လား လို့ ပြန်မေးရင်း ကျမတော်တော်ကို စိတ်အချဉ်ပေါက်တာပါ.. အဲဒီလူတွေကနိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းမှာ လုပ်နေတဲ့ crew တွေပါ…. KL မှာဆို Jalan U Thant ဆိုပြီး လမ်းတောင်ရှိပါသေးတယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသား ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် တယောက်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးပေးထားမှန်း ဘယ် မလေးမှ(ကျမတွေ့ဘူးသော)မသိပါဘူး….. အင်း ကျမလည်း တယောက်ထဲ စိတ်အချဉ်ပေါက်နေမိတာတွေ များနေရဲ့……..
u kaw on February 29, 2012 at 7:40 pm
မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗျာ ဟောလီဒေး ရတဲ့ အခါ တခြားနိုင်ငံကို သွားပြီး ဟောလီးဒေးကြမယ့် အစား မြန်မာပြည်ပြီး ဟောလီးဒေးကြပါလားဗျာ။ နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာလေးတွေမှာ အ၀ီစိတွင်းလေးတခုဖြစ်ဖြစ်၊အိမ်သာလေးတလုံးဖြစ်ဖြစ်၊ပညာသင်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းလေးတခုခုဖြစ်ဖြစ် ဟောလီးဒေး မှာ သုံးမယ့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေးနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်ရင် တနိုင်ငံလုံးကြီးကို မချစ်နိုင်ရင်တောင် တပိုင်တနိုင်လေးတော့ ချစ်ရာ ရောက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ဒီလိုပဲ ကိုယ်တတ်နိုင်သလို ချစ်နေတာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေး ကိုယ်ရှာနိုင်ကတည်းကပါဗျာ။တနိုင်ငံလုံးကို ကျွန်တော်တယောက်တည်း မပြောင်းလဲ့နိုင်ဘူးဆိုတာ သိကတည်းက လုပ်လို့ရတဲ့ ဘက်က ရတဲ့နည်းနဲ့ ကွန်တော်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရပ်ရွာ ပတ်ဝန်းကျင်၊အုပ်စု၊မြုိုနယ် စသည် စသည် ဖြင့် တတ်နိုင်သလို့ ပရဟိတလေးကို ချဲ့လုပ်သွားရင်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပိုတိုးတိုးပြီး ချစ်ရာရောက်နိုင်တာပဲဗျာနော။ အားလုံး လက်တွေ့ကျကျ ကိုယ့်နိုင်ငံလေးကို ချစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
a family physician on March 1, 2012 at 5:16 am
it is partly due to education system in burma. all we do is memorize. there is no critical thinking, discussion, projects to be done on your own. i stayed in burma till I finished high school. all we did was memorize that’s all. we are not discussing good books in class.
people do not readbut sometimes it s not their fault. books are expensive and people have to work hard to eat.
it will takealong time to fix thing but we cab get better. let s not lose hope.